Venice kungenziwa ngokuthi ingenye yamadolobha avakashelwa e-Italy. Eminyakeni yamuva, iziphathimandla zendawo ngisho uya ukhawule ukugeleza izivakashi ezingeni zomthetho. Venice - idolobha-Museum, cishe noma yikuphi isakhiwo - i lesikhumbuzo yezakhiwo kanye zomlando. Lo muzi ubizwa eyakhelwe iziqhingi - 122 yabo, axhunyaniswa ngu amabhuloho 400. Zonke ingxenye endala Venice, nase-ichibi yayo zifakwe UNESCO. Akumangazi ukuthi cishe zonke izivakashi ezifika e-Italy, bayofuna ukuvakashela Venice. Lokhu nomuzi ugcwele ikhubalo ekhethekile, lwenza ukubonakala kwawo engavamile futhi izixazululo lathumela, carnivals nomlando engaqondakali.
Ukuze sifinyelele Venice kuyinto ngendiza. Njalo izivakashi usuku zifika lapha emhlabeni wonke. Kukhona zezindiza ezimbili - Treviso futhi Marco Polo Airport. Bobabili zitholakala emadolobheni asemaphethelweni. Venice, Treviso - Isikhumulo sezindiza sise lide ibanga kusuka edolobheni kuka sezindiza i-Marco Polo. Muhle kancane ezincane lapha fly ongaphakeme izindleko izindiza - Wizz Air, Belle Air, Wings German nabanye. Esikhumulweni sezindiza, omunye evulekile, kwelinye esigungwini. Naphezu kobungako nobuningi bayo encane, it inikeza izivakashi zonke izinkonzo ezidingekayo - imigoqo, izindawo zokudla, izitolo, ukuqasha imoto futhi yasebhange. Okukhulu futhi owavakashela sicabanga kakhudlwana ngalokhu Venice Marco Polo Airport - ke ine isimo ngamazwe futhi waqaphela njengoba enye yezindawo ezinkulu kakhulu emoyeni ezikhumulweni elisenyakatho ye-Italy.
Isikhumulo sezindiza Venice - Marco Polo
Isikhumulo sezindiza yaqanjwa Marco Polo - edume isihambi Venetian. Yakhiwa ngo-1960, itholakala at ibanga 8 km kusuka Venice. It has an omhlaba jikelele nekhodi IATA - VCE. Kukhona kuphela umgibeli oyedwa esibulalayo zezindiza ezimbili, obheke phezulu elide kakhulu ukuba 3300 metres ubude. Ukuhlala lapha, kokubili izindiza omhlaba kanye ezifuywayo. Ngo-2008, sezindiza Venice Marco Polo bathatha iphathwe abagibeli abayizigidi ezingu 6.8 ngobukhulu umgibeli traffic - wayiqeda wesine kuleli zwe ngokuya abagibeli kanye nenombolo izindiza athathwe. Esikhathini esizayo esiseduze neziphathimandla uhlela kabusha Venice zezindiza - esikhundleni egandayiwe asphalt. Ngokusho okulindelwe abasebenzi, lokhu kuzokhuphula umgibeli traffic kuze kube bantfu labatigidzi letingu 8 ngonyaka. Umnikazi sezindiza yinkampani Gcina SPA, ingxenye kungokwalabo kohulumeni basekhaya. Venice Airport itholakala kumephu eduze likaPondo, edolobheni Tessoro - kalula kwezithuthi ezahlukene.
Venice Airport has umgibeli oyedwa esigungwini. Kuyinto isakhiwo ezintathu storey. It kabusha ngemuva zalungiswa ngo 2002. Esitezi zikhona amakamelo abagibeli befika, laba ukulahlwa endaweni isakhiwo, esitezi sesibili kuhlala yokubhalisa amahholo - konke esikhumulweni sezindiza kukhona 60 check-in zokubala abagibeli izindiza. Liphinde lunikeze amakamelo amabili nazo zonke ezinye abagibeli elinde ukugibela indiza. Yonke esitezi sesithathu kuhlala Amahhovisi - emahhovisi izindiza ahlukahlukene. Le ndawo ingqikithi esibulalayo ifinyelela kwezigidi ezingu-53 amamitha. Ihhovisi yezindiza omele angafaka isikhalazo noma iyiphi umgibeli onendlu Ithikithi ukundiza yenethiwekhi. Uma indiza imisiwe, abagibeli iphoqelekile ukuba inikeze ulwazi izizathu ukubambezeleka, uma ukubambezeleka ingaphezu 2 amahora - enikeziwe neziphuzo, futhi ezingaphezu kuka-8 amahora - ehhotela, esakhokhwa yendiza.
Ezokuthutha kusukela sezindiza kuya Venice
izivakashi eziningi bakhathazekile ngesimo lapho evakashele edolobheni YaseVenice - indlela ukusuka esikhumulweni sezindiza. Lapha ungakwazi ukunikeza ongakhetha eziningana - ngeteksi, amanzi, ibhasi noma ukusizakala vaporetto - ukudicilela umkhumbi ezazihamba emzileni. Indlela eshibhe ukuhamba - ibhasi. Izinkampani ukukhonza umzila ibhasi, ezimbili - ATVO (ibhasi okwesibhakabhaka) futhi ACTV (ibhasi orange). Iya Venice udinga imizuzu mayelana 25-30, ithikithi kubiza cishe 7 euro. A ride itekisi izobiza 30 euro itekisi amanzi kufanele ukhokhe azungeze 100 euro. Ukuhamba ngokusebenzisa amanzi Venice kuthatha 1:00. Vaporetto - amanzi izikebhe - Ply phakathi Venice sezindiza futhi kusukela 6.00 ukuze 23,00 ngezikhawu 1 ihora. Intengo Ticket - 15 euro.
Izivakashi ezifika noma amahlamvu e-Venice Marco Polo Airport ikhefu sakhe wokubuyekezwa okuvumelekile. Yonke into ihlelwe sizikhandle futhi ngokunengqondo, iqoqo izikhombo ukusiza ukuthola indlela yabo ngaphakathi. Kukhona ngisho abasebenzi abakhuluma isiRashiya, ngubani kungaxhunywana ukuze uthole usizo. Ngisho noma uya eziningi abantu, izikhulu sezindiza ngokushesha ukukhonza abagibeli ngokwandisa inani labasebenzi. Ukuze ubhalise noma bawaletha umthwalo wakho ehluleka angabacwasi ngokushesha - kuthatha imizuzu engaphezu kuka-25-30. Isikhumulo sezindiza Venice kungamukelwa ukuza kusengaphambili ukuze singathwesi ukuchitha isikhathi elinde ukugibela indiza.
Ngo isakhiwo esibulalayo kukhona amathilomu eziningana lapho nawe ungadla. Izitolo kanye boutiques banezeluleko sasivumela ebanzi izimpahla ngamanani ezifanele, ngezinye izikhathi ngisho ngezansi komuzi. amabhentshi Umsebenzi, lapho ungakwazi ukuthenga ezinye izinto eziyizikhumbuzo kanye buso, nezinto ezincane ezihlukahlukene. Kunezinhlobo eziningana amagatsha asebhange kanye ATM, awayikhokhi intela. Eduze sezindiza kukhona amahhotela eziningana emazingeni ehlukene. Tour edeskini futhi eposini, inikeza-Wi-Fi indawo. isitoreji Impahla kanye ikamelo umama nengane usizo kahle kudlule isikhathi elinde ukugibela indiza. Kukhona VIP-lounge abagibeli ibhizinisi ekilasini futhi Duty-DRM. Ezinganeni kukhona ebaleni lokudlala yezingane. Emahhovisi ekhethekile ungakwazi ukuqasha imoto. Zonke imikhiqizo Bathengisa esikhumulweni sezindiza, bavunyelwe ukuthi bathunyelwe kusukela lizwe. Esikhumulweni sezindiza ungathenga iziphuzo Italian oludakayo, uphawu tetimphahla, kudla, amaphephandaba, omagazini, izincwadi nokunye okuningi. Esikhumulweni sezindiza, ungakwazi ukubhuka uhambo Venice ngu gondola - izindleko ukuhamba kuzoncika hhayi kuphela isizini kanye nesikhathi, kodwa futhi ngenani nesisindo imithwalo.
Ukuze abagibeli Business Class ungakwazi ukujabulela isevisi ekhethekile esikhumulweni sezindiza - ke kusho usekelo umhlahlandlela siqu ngubani uzohlangana futhi zikhiphe izivakashi zakhe ukusheshisa ukudlula zonke imicikilisho sezindiza, kunesithembiso kule VIP-ndawo-Marco Polo Airport. Ngaphezu kwalokho, u-opharetha wenethiwekhi umlindisango ekuklanyweni kanye nokuhlolwa umthwalo.
Airline KLM: Izibuyekezo
Zezindiza zamazwe omhlaba eCambodia. Indlela ndizela Cambodia
Lungiselela sushi ekhaya? Kalula!
Indlela ukubeka umntwana ibele?
UMikhali Kleofas Oginski: Biography